Anyị Kwesịrị Kwụsị Infgụ Mmetụta Mgbe Anyị Kwụsịrị Na-ewu ewu | Martech Zone
Anyị Kwesịrị Saysị na-ekwu Mmetụta Mgbe Anyị Pụtara Popular
Saturday, December 29, 2012 Saturday, December 29, 2012 Douglas Karr
Ahụrụ m ya ọzọ taa List ọzọ 2012 Influencer List. Enweghị m ike ị gafere ndepụta niile, agbanyeghị, n'ihi na m na-arụ ọrụ nke ukwuu ịsutu mbọ m ihu m wee wepụ ntutu m. Ọ bụghị ndepụta ndepụta mmetụta ọ bụla, ọ bụ naanị ndepụta ndị ọzọ na-ewu ewu. Iji jide n'aka na anyị niile ghọtara ọdịiche ahụ, ka anyị gaa n'ihu kọwaa ha abụọ:
Ndị mara mma: Ọtụtụ mmadụ ma ọ bụ otu onye ma ọ bụ ndị mmadụ masịrị ya, nwee mmasị na ya.
Mmetụta: Inwe mmetụta dị ukwuu n'ahụ mmadụ ma ọ bụ ihe.
Maka gị ndị ahịa n’èzí, enwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti ha abụọ. Ọ bụ eyeballs vesos nzube. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọtụtụ ndị mmadụ -ahụ ihe gị… gaa maka ewu ewu. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọtụtụ ndị mmadụ ịzụta ihe gị… gaa maka mmetụta. Ndị mmadụ ma ọ bụ ụdị ama ama nwere ọtụtụ mmadụ na dị ka ha. Ndị na-emetụta ma ọ bụ ụdị nwere ndị nwere tụkwasị obi ha.
Ma enwetaghị ya? Otu n'ime 2012 nne kachasị ewu ewu bụ Nicole "Snooki" Polizzi. Na Twitter, Snooki nwere ndị na-eso ụzọ 6.1. Snooki nwere akara Klout nke 88. Isiokwu nke Snooki gụnyere foto, Pizza, ime achịcha, ndị agha, na akpụkpọ ụkwụ. Aha Snooki bụkwa otu nne na nne n'afọ a n'ọtụtụ ndepụta.
O doro anya na Snooki bụ ewu ewu. Ma ma ọ bụ na ọ bụghị mmetụta n'isiokwu ndị a bụ arụ ụka. Ndị mmadụ nwere ike ilegara Snooki anya maka ụdị akpụkpọ ụkwụ kachasị ọhụrụ kemgbe ọ bụ akara ngosi pop pop mana o doro anya na ọ ga - enyere aka ịmetụta echiche gị na nzụta igwefoto gị ọzọ, ịzụta Pizza, ajụjụ ọgụ, usoro esi nri ma ọ bụ ajụjụ nne na nna. Anaghị m akụ Snooki… nanị na-atụ aka na Snooki mara oke ama, mana enwere mmetụta na-enyo enyo.
Nsogbu bụ ndị a mmetụta akara na ndepụta anaghị enwe mmetụta ọ bụla ma ọlị. Ndepụta Snooki dị ka onye na - eme ihe ọfụma ezighi ezi. Ọ bụrụ na m chọrọ uche na foto, aga m achọ Paul D'Andrea. Pizza? Ana m agakwuru enyi m James nke nwere Brozinni si. Ime achịcha? Nne m.
Ghọtara isi. Ma ị na-ahụ ihe banyere ndị na-emetụta m? Ha abughi ndi a ma ama ma ha enweghi otutu nde ndi n'eso ha ma obu ndi na akwado ha. A tụkwasịrị ha obi n'ihi na mụ na onye nke ọ bụla n'ime ha nwere mmekọrịta oge na-aga, ha tụkwasịrị m obi. Adịghị m discounting na-ewu ewu na ndị mmadụ nwere ike ịbụ influential ọtụtụ na-. Agbanyeghị, ana m ekwupụta na ka m nwee mmetụta, mmadụ ga-ewu ewu. Nke ahụ abụghị ikpe.
Dị ka ihe atụ nke onwe, amaara m na abụrụla m mmetụta na oghere teknụzụ ahịa. Achọla m ihe karịrị $ 500 nde maka nnweta na itinye ego na afọ ole na ole gara aga wee nye ụfọdụ ụlọ ọrụ nnukwu nduzi. Nke ahụ kwuru, enweghị m mmasị na oghere. Won't gaghị ahụ m n'elu 10 nke ọtụtụ ndepụta ma anaghị m atụ anya ihe omume na mgbasa ozi na mgbasa ozi. Ekwenyere m, ọ bụrụ na edere ndepụta ndị ahụ dabere na njikwa ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi, aga m achọpụta na m kachasị elu. Nke ahụ abụghị mkpesa… naanị nchọpụta.
Anyị kwesịrị ịchọ ụzọ iji mara ọdịiche dị n'etiti mmetụta na ewu ewu, n'agbanyeghị. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịchọpụta ndị na - eme ihe ike na itinye ego na ndị nwere mmetụta iji nyere aka kesaa ngwaahịa na ọrụ ha. Agbanyeghị, ndị na-ere ahịa ga-ezere igbu ego na ndị na-ewu ewu naanị anaghị emetụta ihe ọ bụla.
Tags: mmetụtammetụtaewu ewuewu ewu
Social Media: Worldwa nke ohere maka obere azụmaahịa
Dec 30, 2012 na 6:25 PM
Echere m na anyị chọrọ ụdị nke atọ karịa "ndị ama ama" na "ndị nwere mmetụta" nke bụ naanị "ọhụụ." Agaghị m arụ ụka na Snooki bụ ihe niile na-ewu ewu (“dị ka, masịrị ma ọ bụ nwee ọ ”ụ”) dịka a na-ahụ ya anya.
Daalụ maka ịkekọrịta, agbanyeghị, Doug!
Dec 30, 2012 na 11:38 PM
Douglas, dị ka ị hụworo, anyị na Little Bird kwenyere na ewu ewu n'etiti ndị ọkachamara na isiokwu bụ ezigbo onye nnọchiteanya na nduzi nke mmetụta, nka, wdg. Kedu ka nke ahụ si eme n'echiche gị dị ka ụzọ kachasị mma iji tụọ mmetụta?
Dee 31, 2012 na 5: 03 AM
Ndewo @marshallkirkpatrick: disqus! Little Bird na-arụ nnukwu ọrụ ahụ n'inye akụkụ dị iche iche nke isiokwu enyere na anyị nwere ike ịmata ndị na-emetụta ya. Ọbụna n'ime niche enwere ihe egwu na-ele naanị ewu ewu. Echere m ma ọ bụrụ na e nwere omume ndị dị ka retweets, ịkekọrịta ọzọ, wdg na-ekpughe ikike mmadụ nwere ịmetụta onye ọzọ ime ihe. Nyere akaụntụ twitter abụọ - otu nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya na otu ya na ndị na - eso ụzọ ole na ole mana ọtụtụ retweets - m ga-elekwasị anya na nke ikpeazụ.
Dec 31, 2012 na 4:48 PM
Douglass, daalụ maka ide ihe a. Ma ugbu a, enwere m ịjụ ihe nke a pụtara: “Nnụnnụ Nta na-arụ nnukwu ọrụ ahụ n'inye akụkụ dị iche iche nke a
nyere isiokwu anyị nwere ike ịmata ndị metụtara ya. ”
Abụ m onye nnụnụ Little Bird beta mana anaghị m ahụ na nke a bụ uru bara m uru. O doro anya na m na-efu ihe na ihe ahụ bụ ihe ị na-enweta na nkọwa a. Biko ị nwere ike ịkọwa karịa? Daalụ nke ukwuu.
Dec 31, 2012 na 11:04 PM
Ndewo @ google-8dffa4a27cb92d8c652480f605a5a5bb: disqus - with Little Bird, Ọ masiri m na ọrụ bụ otu n'ime nzacha na enwere m ike ịtụle ọrụ, ịge ntị, yana ndị isi isiokwu megide kọlụm kachasị agbasoro. Ọ naghị ewepụta ndepụta ndepụta nke ndị na - eme ihe ike, mana ọ na - enyere m aka ịlaghachi azụ ma na - eme nyocha nke akụkọ.
N'eziokwu na-ekwu okwu, ngwá ọrụ dị ka nke a abụghị ihe mkpali maka ide post a. Ọ bụ ndepụta nzuzu Top Influencer edepụtara maka afọ 2012 nke kpaliri m. Enwere m ekele maka ngwaọrụ dịka Klout, Appinions, na Little Bird - ndị na-anwa ịmepụta algọridim iji nye nsonaazụ kacha mma. Ọ bụ nnọọ a mgbagwoju nsogbu!
Jenụwarị 2, 2013 na 3:53 PM
Douglas - Nnukwu ịhụ na ị ka na-efe ọkọlọtọ na mbipụta a. Anyị ejirila oge ụfọdụ na-agbalị ịkụziri ndị mmadụ isiokwu a. Lelee vidiyo anyị mepụtara n'oge na-adịbeghị anya nke na-emetụ n'obi nke post gị. http://appinions.com/videos/the-true-meaning-of-influence/ Debe ezigbo ọrụ.